Layma's World: May 2008
တနေ့ ညနေခင်းဍ္ဍ် လေးမသည် မီးဖိုချောင်ထဲတွင် ဂျာနယ်တစ်စောင်နှင့်အတူ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေ၏ …။
( ဘယ်လိုကြီးတုန်းလို့ မစဉ်းစားနဲ့.. ဟင်းချက်ရင်း ဂျာနယ်ဖတ်နေတာ ..လို့ မှတ်..)
ထို့နောက် ဟင်းအိုးထဲ ရေထည့်ကာ ကြက်သွန်နွှာရင်း စဉ်းစားမိသည်မှာ …..
လူတစ်ယောက်ကို တစ်နေ့ဆန်နို့ ဆီဗူး တစ်လုံးပဲထား… တစ်ပြည်ကို ၈ ရက် … တစ်ပတ်စားရတယ်ပဲထား …
တစ်တင်းခွဲအိတ်ဆိုရင် ၂၄ ပတ် စားရမယ်…
လူတစ်ယောက်ကို ဆန်တစ်အိတ် ၂၄ ပတ် နှုန်းနဲ့သောင်းချီ သိန်းချီတဲ့ လူတွေကို ဘယ်သူက ရေရှည် တာဝန်ယူမလဲ … ။
ဆန်ကြမ်းက တစ်အိတ် ၂သောင်း … ဆန်ချောက ၅ သောင်း… ဆိုတော့ …။
အထက်ပါအတိုင်း စစ်စစ်ပေါက် တွေးမိသည်မှာ ဂျာနယ်တွင်ပါသော စာတစ်စုကြောင့်ဖြစ်သည် …။
“ အချို့ မှာ မိမိနေရပ်သို့ပြန်လိုကြပြီး အချို့မှာ စိတ်ဓါတ်တွေကျဆင်းကာ ဒုက္ခသည် စခန်းများနောက်သို့သာ လိုက်လံ စားသောက်နေတော့မည် ” ဟုသိရ ..။ ”
ဒီလိုဆို လူညွန့် တုံးပြီပေါ့ …။ အလှူရှင်တွေရှိလို့ ကျွေးနိုင်တယ်ပဲထား … နိုင်ငံတော်အတွက် နစ်နာပေသည် … လူ့စွမ်းအားဆုံးရှုံးပေတော့မည် … ( အလဲ့ … လေကြီးလေကျယ် တွေးကြည့်တာ … ) … ။
ထိုသို့မဖြစ်ရန် ထိုသူတို့၏ စိတ်ကို ဦးစွာ ဖေးမပေးရမည် …။
လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရမည် …။
အလုပ်ဟုဆိုရာတွင်လည်း သူတို့ မူလက လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လယ်အလုပ် .. တံငါအလုပ် ..အစရှိသည့် ကျွမ်းကျင်ပြီးသား အလုပ်များဖြစ်မှသာ အဆင်ပြေလ်ိမ့်မည် …။
လယ်များမှာ ရေငန်ဝင်သောကြောင့် ရေငန်တွင်စိုက်သော စပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာရပေတော့မယ်…။ ထို့နောက် လယ်ယာ အထောက်အကူပြု ကျွဲ… နွားများပံ့ပိုးရမည် …။
နေစရာ အိမ်စီမံပေးရမည် …။ အိမ်အတွက် အဖိုးအခ သတ်မှတ်ပြီး ငွေသွင်းခိုင်းလျှင်လည်း မသင့်မလျော် ဖြစ်ဦးမည်…။ လူတိုင်းအတွက် အိမ်တစ်လုံးစီဆောက်ပေးရလျှင်လည်း ဒေ၀ါလီခံရကိန်း ရှိသည် …။
တော်အိရော်အိ အိမ်မျိုးလည်း ဆောက်ပေးလို့မဖြစ်ပေ …။
ရေမြေအနေအထားပြောင်းသဖြင့် မုန်တိုင်းသည် လမ်းပွင့် သွားပြီ ဖြစ်ရာ နောင်နှစ်တွေ အတွက် အတော်အတန် ခံနိုင်သော အိမ်မျိုး ဖြစ်မှ တော်ပေလိမ့်မည်…။
မြေပိုင်ဆိုင်မှု … လယ်ပိုင်ဆိ်ုင်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအမှု ပြုရမည် … ။
ထိုထိုသို့သော အကြောင်းအရာများကို များများစားစား တွေးတောပြီးသကာလ လေးမသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချပြီးသည့် မျက်နှာထားနှင့် ဇတ်ခနဲထကာ အသံတိတ် ကြွေးကြော်လိုက်သည်မှာ …
“ တော်ပြီ .. ???? ကျရင် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်တော့ဘူး. ..။ သမ္မတဖြစ်ရင် ဦးနှောက်ခြောက်နေဦးမယ်…။ ငါ့ဟာငါ အေးရာအေးကြောင်း မီးဖိုထဲမှာ ထမင်းချက်နေတာပဲ ကောင်းတယ် … ” ဟူသတည်း …. .။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ရိုးရိုးလေးဖတ်ပါ ..၊ ပါးပါးလေးတွေးပါ …၊ ၀ိုးတ၀ါး မေ့လိုက်ပါ ... ။
Posted by lay-ma at 4:19 AM 18 comments Links to this post
Labels: Pieces, Seasonal Post
မိုးသည် ဆက်၍ ...ဆက်၍ ... ရွာနေပေလိမ့်မည်…။ ။
Posted by lay-ma at 2:57 AM7comments Links to this post
Labels: Seasonal Post, Wondering
ညည်းတို့ က သတင်းစာမှ မဖတ်ဘဲ … သတင်းစာထဲ မုန်တိုင်းတိုက်နေတာ ဧပြီလကတည်းကဆိုပဲ အေ့ …။ ညည်းတို့ က သတင်းစာဆို နာရေးလောက်ပဲ ကြည့်တာကိုး … ။ မိုးလေ၀သ သတင်းမဖတ်တော့ မသိဘူးပေါ့…။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မလုပ်နိုင်တာ... ။
Posted by lay-ma at 9:57 PM 15 comments Links to this post
ဘလော့ဂ် ရပ်ဝန်းမှာ တစ်နှစ်တာ …
Blogspot …. wordpress … iblogger … ဘယ်ရွာကိုပဲပြောင်းပြောင်း ဘယ်အိမ်မှာပဲနေနေ … လေးမ အတွက်တော့ ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်း မှာ ထင်ရာစိုင်းနေခဲ့တာ တစ်နှစ်ကြီးများတောင် ပြည့်သွားပြီ..။
၂၀၀ရ မေလကုန်ခါနီးက စခဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၀၈ မေလကုန်ခါနီးဆိုရင် တစ်နှစ်ပေါ့ …။
ဒါပေမယ့် မေလဆန်းမှာပဲ အမှတ်တရပိုစ့်လေးတင်လိုက်ပါတယ်…။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း ဒီက connection က အစိုးမရဘူးလေ..။ မေလရောက်ပြီဆိုတော့ ( မိုးတွေကရွာ .. မုန်တိုင်းကရှိ…အဲ…အဲဒါ..ကို ဆိုလိုတာပါ…) connection က ပြုတ်ချင်ပြုတ်မှာ … ရေအောက်က cable ကြိုးတွေက ပျက်ချင်ပျက်မှာ … server က ဒေါင်းချင်ဒေါင်းမှာလေ…။
လေးမက တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအနေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကွန့် မန့် လေးတွေကို ( အားလုံးပေါင်း ၉၃ - ၅) slide show လေး လုပ်ထားတာဆိုတော့ မတင်ရရင် ကလိ… ကလိ နဲ့ တော်တော် အခဲမကျေ ဖြစ်မိမှာ …။
အဲလို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အတွင်းကျကျသိလို့ လကုန်ထိမစောင့်တော့ဘူး… ။ မေဒေး နေ့ မှာပဲ Happy Bitrhday လုပ်လိုက်တယ်…။
Happy Birthday , one-year old my Virtual World !!!
P.s. မုန့်ကျွေးရန် ပက်ကျံ မရှိပါ..။
၀န်ခံချက် ။ ။ မလေး(မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ) ဘလော့ဂ်မှာ comment တွေကို slide show လေးလုပ်ထားတာကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျလို့ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ အတုခိုးပါသည်..။
Posted by lay-ma at 11:43 PM 24 comments Links to this post
Labels: Analysis, Pieces